လူသတ်သမားများ၏အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲအားသပိတ်မှောက်ဆန့်ကျင့်သည်အနေဖြင့် လူသတ်သမားများဝါဒဖြန့်ချီရာအင်တာနက်စာမျက်နှာများကြည့်ရှူမရစေရန် တားဖြစ်ပိတ်ပင်
နအဖရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက် ဆန့် ကျင်သည့်အနေဖြင့် နအဖ၏ ၀ါဒဖြန့် ချီရေး အင်တာနက်စာမျက်နှာများအား ၄င်းတို့ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်နေ့ တွင် ကြည့်ရှူမရစေရန်အတွက် တားမြစ်ပိတ်ပင်ပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ပါသည်။
နအဖ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား ဆန့် ကျင်သပိတ်မှောက်သည့်အနေဖြင့် နအဖ၏ ၀ါဒဖြန့် ချီရေး အင်တာနက်စာမျက်နှာများအား ပိတ်ဆို့ ပြောင်းလိုက်ပြီး ခွပ်ဒေါင်းအလံတင်ကာ "နအဖ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား အလိုမရှိ" စာသားများ ထည့်သွင်းလိုက်ပါသည်။
နအဖရဲ့ရွေးချယ်ထားပြီးသားသူများနဲ့ကောက်ကျစ်စွာ ကျင်းပတဲ့ စီစဉ်ကျင်းပသည့် နအဖ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား ပြည်သူလူထုမှ သပိတ်မှောက်ရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
နအဖ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အလိုမရှိ။
ဤ အွန်လိုင်းမှနေ၍ နအဖရွေးကောက်ပွဲဆန့် ကျင်ရေးသပိတ်မှောက်လုပ်ဆောင်မှုအား မျိုးချစ်ပြည်သူများမှ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, November 06, 2010 Links to this post
ပြည်သူလူထု ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ ဆန္ဒအမှန်၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို တန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့နအဖအတုအယောင်၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ကြပါစို့ ။
မိခင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့နိုင်ဘို့ သားငယ် ကိုထိန်လင်း တနင်္လာနေ့ တွင်မြန်မာသံရုံးတွင်ဗီဇာ လျှောက်မည် အာဏာပိုင်များက ဗီဇာပေးမပေးမသိရှိရသေးပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သားငယ်ဖြစ်သူ ကင်မ် ခေါ် ကိုထိန်လင်းဟာ မိခင်နဲ့ တွေ့ရအောင် မြန်မာ နိုင်ငံ ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာ လျှောက်ထား ဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ မှာ ရောက်ရှိ နေ ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ ကျရင် မြန်မာ သံရုံးမှာ ဗီဇာ လျှောက်ထားမယ်လို့ ကင်မ်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
သူ့ကို မြန်မာ အစိုးရက ဗီဇာ ပေးမှာလား၊ သူ့မိခင်နဲ့ရော တွေ့ခွင့် ရမှာလားဆိုတာ ကတော့ မသေချာ ပါဘူးလို့ ကင်မ်က ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို နေအိမ် အကျယ် ချုပ် ချထားတဲ့ သက်တမ်းဟာ လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ကုန်ဆုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့မှာ တကယ် တန်း ပြန်လွှတ် ပေးမလား ဆိုတာ ကိုလည်း အတိအကျ မပြောနိုင်သေး ပါဘူး။
ဥပဒေ အရ ဆိုရင် တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း ထားလို့ မရဘူး လို့ သူ့ရဲ့ ရှေ့နေ တွေက ပြောပါတယ်။
မကြာမီက ဟနွိုင်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်း အဝေးမှာ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို လွှတ်ပေးဖို့ ကိစ္စဟာ ဥပဒေ အရသာ အဆုံး အဖြတ် ပြုမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကင်မ်ဟာ မိခင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်က သာ နောက်ဆုံး တွေ့ခွင့် ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ နောက်ပိုင်း နောက်ထပ် ဗီဇာ လျှောက်ထားမှု တွေ မှာတော့ မရခဲ့ဘူး လို့ သိရပါတယ်။
နှိုင်းယှဉ် ထားပုံ တစ်ခုပါ..။
ပြည်သူ့တွေကတော့ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေလို့ စေတနာ အမှန်နဲ့ တကယ် ပြည်သူလူထုမေတ္တာ စေတနာ
အပြည့်အဝ ရရှိခဲ့တဲ့ ကျမတို့ခေါင်းဆောင်
ခြင်္သေ့ တံဆိပ် တိရိစ္ဆာန် စိတ်နဲ့ လူမျက်နှာတွေရဲ့ပါတီဆိုတော့တိရိစ္ဆှာန်တွေဘဲ ချစ်တဲ့ ပါတီ၊ ဒီပါတီ ကိုခေါ်ပါသလား..။
ဒီနေ့ ဂျပန်မှ နာမည်ကျော် TBS သတင်းဋ္ဌာနမှ ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ ၇ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ စစ်အစိုးရ အကြောက်ဆုံးလူရဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက် ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရန်ကုန်မှာ ဘဘဦးဝင်းတင်နဲ့ အင်တာဗျူးကို ထုတ်လွှင့် ပြသသွားပါတယ်..။
Kogyinyo မှ ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်..။ မျှဝေပေးတဲ့ Jutta Pflueg အား ကျေးဇူးတင်ပါသည်..။
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Saturday, November 06, 2010 Links to this post
မြန်မာနိုင်တော်အလံအား မီးရှို့ဖျတ်ဆီးသူ ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်
ဦးဖရန်စစ် မုန်လျန်းပေါင် (၄၇)နှစ် အကြီးတန်းစာရေး ချင်းပြည်နယ် တွန်းဇံမြို့နယ် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီသည် ( ၂၁ )အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀ခုနှစ် ညနေ၃ နာရီ ခန့်တွင် ပြုလုပ်သော နိုင်ငံတော်အလံ အသစ်တင် အခမ်းအနားတွင် ပါဝင်၍ အထက် အမိန့်အရ နိုင်ငံတော် အလံဟောင်အား တိုင်ပေါ်မှချခြင်းနှင့်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ( ၂၁ )နေ့ညသန်ခေါင်တွင် ၄င်း၏နေအိမ်တွင် ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားပါသည်။
ဦးဖရန်စစ် မုန်လျန်းပေါင် သည် ဇနီးသည်နှင့်အတူ ရန်ကုန်သို့ဆေးဝါးကုသရာမှ ကျန်းမာ စွာဖြင့်အောက်တိုဘာလဆန်းတွင် တွန်းဇံမြို့သို့ပြန်ရောက်လာပါသည်။ဦးဖရန်စစ် မုန်လျန်းပေါင် သည် ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်း၍ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းသူ၊ အလုပ်တာဝန်ဝတ္တရာများကြေပွန်သူ ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်း၏ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်မှုနှင့်ပတ်သတ်၍ ကြားသိသူ အားလုံး အထိတ်တလန့်ဖြစ်နေကြပါသည်။ ဇနီးနှင့်သား( ၃ )ယောက်သမီး( ၂ )ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
နအဖ၏ ဝါဒဖြန့်ချိရေးဇတ်ကားများကို ရိုက်ကူးခဲ့သော ဒါရိုက်တာ တင်သန်းဦး သေဆုံး
"အာရုံဦးမှာ ဖူးသည့်ကြာ" နအဖ၀ါဒဖြန့် ချီရေးရုပ်ရှင်ကားအား ရိုက်ကူးခဲ့သူ ဒါရိုက်တာ တင်သန်းဦး ယနေ့ နေ့ လည် (၂) နာရီခွဲခန့် အချိန်တွင် စစ်ဆေးရုံး၌ သေဆုံးသွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, November 05, 2010 Links to this post
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Friday, November 05, 2010 Links to this post
ဒီလို နေထိုင်ရေး.. စားရေး သောက်ရေး အနာဂတ်ရေးတွေ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ လက်ရှိအနေအထားတွေမှာ သားသမီးချင်း မိဘချင်း ကိုယ်ချင်းစာပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လက်ရှိအနေအထားမှာ နေထိုင်ရရင်ကော ဆိုတဲ့ ခံစားချက်လေးနဲ့ လူစိတ်လေး နည်းနည်းပါပါး ထားကြည့်ကြပါဦးလို့ အကြံပြုလိုက်ရပါတယ် စစ်အာဏာရှင်ကြီးများ ခင်ဗျား...။
ဓာတ်ပုံများ ညီငယ် အလင်းဆက်မှ ပေးပို့ပါသည်....။
မိခင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေ့နိုင်ဖို့အတွက် သားငယ်ဖြစ်သူ ကိုထိန်လင်း ခေါ် ကင်မ် အဲရစ်ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာလျှောက်
နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း နေအိမ်အကျယ်ချုပ် သက်တမ်းစေ့မဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေ့နိုင်ဖို့အတွက် သားငယ်ဖြစ်သူ ကိုထိန်လင်း ခေါ် ကင်မ် အဲရစ်ဟာ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် မနေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့က မြန်မာစစ်အစိုးရ သံရုံးမှာ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ လျှောက်ထားခဲ့တယ်လို့ မိသားစုနဲ့ နီးစပ်သူတွေက RFA ကို ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ စစ်အစိုးရ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့မှာ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်က လွတ်လာမယ်လို့ အများက ယူဆထားပါတယ်။ ကိုထိန်လင်းဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကွယ်လွန်သူ ဒေါက်တာ မိုက်ကယ် အဲရစ်တို့ရဲ့ သား ၂ ဦးထဲက သားငယ် ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုထိန်လင်းဟာ အခုအခါ အသက် ၃၂ နှစ် အရွယ်ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၉ ဧင်္ပြီလ မှာတုန်းက နှစ်ပေါင်းများစွာ ကွဲကွာနေရတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ ပြန်လည်တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှု အထူး အယူခံကို ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာ ကြားနာခဲ့ပါတယ်။
ရှေ့နေတွေကတော့ အယူအခံအမှုအရ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ပြန်လွတ်နိုင်တယ်လို့ မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။
နအဖ ရဲ့ အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာသိမှတ်စရာ
ဆန္ဒမဲကို ဘယ်သူတွေက ရေတွက်ခွင့်ရမလဲ
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့်နေ့၌ ဆန္ဒမဲပေးခြင်း ပြီးဆုံးလျှင် ပြီးဆုံးချင်း ဆန္ဒမဲ ရေတွက်ခြင်းကို မဲရုံမှူး ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ယင်းက တာဝန်ပေးအပ်ထားသော မဲရုံအဖွဲ့ဝင်က ဖြစ်စေ မဲရုံတွင်ပင် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ၊ အများပြည်သူများ၊ မဲရုံကိုယ်စားလှယ်များ ရှေ့မှောက်၌ ဆန္ဒပြုပြီးသော ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့် နည်းဥပဒေ ၅၁(ဃ) အရ လက်ခံ ရရှိထားသော ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်များကို ရေတွက်ရမည်။ ထိုသို့ ရေတွက်ပြီးနောက် ကော်မရှင်က ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း စာရင်းများကို ပြုစုရမည်။
မဲရုံမှူးက ဆန္ဒမဲ ရေတွက်ရာမှာ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်မလဲ
မဲရုံမှူးသည် ဆန္ဒမဲ ရေတွက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည် -
ဆန္ဒမဲ ရေတွက်နေရာတွင် ရောက်ရှိနေသည့် နည်းဥပဒေ ၆၅ ပါ သက်သေ အနည်းဆုံး ၁၀ ဦး၏ အမည်စာရင်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။
ထုတ်ပေးသည့် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့် မဲပုံးအတွင်းမှ ရရှိသည့် ဆန္ဒမဲလက်မှတ် အရေအတွက်သည် ကိုက်ညီမှု ရှိ၊ မရှိကို စစ်ဆေးရမည်။ ကိုက်ညီမှု မရှိပါက မှတ်တမ်းတင်၍ သက်ဆိုင်ရာ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲသို့ တင်ပြရမည်။ သို့ရာတွင် ဆန္ဒမဲ ရေတွက်ခြင်းကိုမူ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည်။
မဲပုံးထဲမှ ဆန္ဒမဲတွေကို ဘယ်လိုပြုစုမလဲ
မဲပုံးထဲမှ ထုတ်ယူရရှိသည့် ဆန္ဒပြုပြီးသော ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များနှင့် နည်းဥပဒေ ၅၁(ဃ)အရ လက်ခံ ရရှိထားသော ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်များကို ဆန္ဒပြုထားသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးစီ၏ အမည်အလိုက် သီးခြားခွဲ၍ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးစီ ရရှိသည့် ဆန္ဒမဲ အရေအတွက်ကို ပုံစံ (၁၆) ဖြင့် သုံးစောင်ပြုစုရမည်။ ယင်းပုံစံများတွင် မှန်ကန်ကြောင်း မဲရုံမှူး၊ မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များနှင့် မဲရုံ ကိုယ်စားလှယ်များက လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ပုံစံတစ်စောင်ကို မြို့နယ် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ လည်းကောင်း၊ ကျန်တစ်စောင်ကို ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ လည်းကောင်း ပေးပို့ရမည်။ တစ်စောင်ကို မဲရုံမှူး၏ လက်ဝယ်တွင် ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
မဲပုံးထဲမှထုတ်ယူပြီး ဆန္ဒမဲတွေကို ချိပ်တံဆိပ်ရိုက်ရမည်
(ဆ) မဲပုံးထဲမှ ထုတ်ယူရရှိသော ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်များနှင့် နည်းဥပဒေ ၅၁(ဃ)အရ လက်ခံ ရရှိထားသော ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်များ အားလုံးကို ရေတွက်ပြီးစီးသည့်အခါ မဲရုံမှူးသည် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးစီ ရရှိသည့် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များနှင့် ကြိုဆင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်များကို သီးခြားအိတ်များတွင်ထည့်ကာ လုံခြုံအောင်ပိတ်ပြီး ချိပ်တံဆိပ် ရိုက်နှိပ်ရမည်။ ယင်းမဲရုံမှ မဲရုံ ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အကူ ကိုယ်စားလှယ်များ အားလည်း ချိပ်တံဆိပ် ရိုက်နှိပ်ခွင့် ပေးရမည်။ ယင်းအိတ် အသီးသီးပေါ်တွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ အမည်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမည်၊ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အမည်နှင့် မဲရုံအမှတ် တို့ကို ထင်ရှားစွာရေးမှတ်ပြီး အထုပ်တစ်ထုပ် ပြုလုပ်ရမည်။
ဆန္ဒမဲ အများဆုံးရ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ဘယ်သူက ကြေညာမလဲ
၇၂။ (က) နည်းဥပဒေ ၆၇ (ခ) အရ ပုံစံ (၁၉) ဖြင့် ပေးပို့သည့် ခိုင်လုံသည့် ဆန္ဒမဲအရေအတွက် အများဆုံးရရှိ သော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရသည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက ကြေညာရမည်။ ယင်းကြေညာချက် တစ်စောင်စီကို လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကော်မရှင်သို့ အမြန်ဆုံးပေးပို့ တင်ပြရမည်ဟု news-eleven ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြပါရှိပါသည်.။
ရွေးကောက်ပွဲ အကြို တံဆိပ်ခေါင်းတွေ ထုတ်အုံးမယ်ဆိုပါလား..
နအဖ ရဲ့ အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲ အမှတ်တရ တံဆိပ်ခေါင်းတွေ ထုတ်ဝေမယ်လို့ စာတိုက်နဲ့ ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနက ပြောပါတယ်။ ၅၀၀ ကျပ်တန် တံဆိပ်ခေါင်းတွေ ကို တနင်္ဂနွေနေ့ မနက် ၉ နာရီခွဲမှာ တနိုင်ငံလုံးမှာ စတင်ရောင်းချမှာ ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ စာတိုက်နဲ့ ကြေးနန်းဌာနက ပြောတယ်လို့ ဆင်ဟွာသတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီမှလွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သော ဦးဒိုင်ထုန်း (မတူပီမြို့နယ်၊ အမှတ်(၁)မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း)နှင့် ဦးလျှံကြယ် (မတူပီမြို့နယ်၊ အမှတ်(၁) မဲဆန္ဒနယ၊် ပြည်သူ့လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း)တို့၏ (၂၃.၁၀.၂၀၁၀) ရက်နေ့၌ ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်ဟာလ်တူးကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်သော ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး ဟောပြောပွဲတွင်ဒေသခံ ပြည်သူလူထုသို့ ဟောပြောချက်များသည် နအဖနှင့် ကြံ့ဖွံ့ပါတီတို့ အပေါ်ပုတ်ခတ်စော်ကားခြင်း၊ အသရေဖျက်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု ကျူးလွန်ရာ ရောက်သည်ဟူ၍ ချင်းပြည်နယ်ကြံ့ဖွံ့ပါတီမှ ချင်းပြည်နယ် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီနှင့် ချင်းပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့( ၂၇.၁၀.၂၀၁၀) တွင် တိုင်ကြားခဲ့သည်ဟုသတင်းရရှိပါသည်။
ထိုအမှုနှင့် ပါတ်သက်၍ ချင်းပြည်နယ် ဥက္ကဌဦးဟုန်းငိုင်းမှ ချင်းတိုးတက် ရေးပါတီ၏ နအဖအပေါ် ပုတ်ခတ်စော်ကားခြင်း၊ အသရေဖျတ်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှု ကျူးလွန်ခြင်း ဆိုသည့်အမှုအပေါ် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း၍ စစ်ဆေးအရေးယူရန် ပြင်ဆင်နေသည်ဟုသတင်းရရှိပါသည်။ ဦဟုန်းငိုင်းသည် ချင်းပြည်နယ်ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ခေါင်းဆောင်အပြင် အနာဂါတ်ချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် လျာထာခြင်း ခံရသလိုလည်းဖြစ်သည်။
ထိုအပြင် ချင်းပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ချင်းပြည်နယ်ကြံ့ဖွံ့ပါတီ၏ဆန္ဒအတိုင်း ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအပေါ် ပထမဆုံးအကြိမ်နှင့်နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် (၁.၁၁.၂၀၁၀)တွင် ပြင်းထန်စွာ သတိပေးချက်အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
ချင်းပြည်နယ်ကြံ့ဖွံ့ပါတီသည် မတူပီမြို့နယ်တွင် ချင်း တိုးတက်ရေးပါတီအား အနိုင်ရရှိ ရန်ယှဉ် ပြိုင်နိုင်ခြင်းမရှိ၍ ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များနှင့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတို့ ကိုအလွဲသုံးစားပြု၍ ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ အပေါ် မတရားတဖြင့် အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဒေသခံလူထုမှဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါသည်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီ၏ တရားလက်လွတ် အပြုအမူများကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလ တွင်ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အတုအယောင် ဒီမိုကရေစီ၏ သရုပ်မှန်ကို ယခုပင်တွေ့မြင်နေရပြီး ဖြစ်၍ ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုကာလ တွင်လည်းလွတ်လပ်စွာဟောပြောခွင့်မရှိခြင်းအပေါ် ချင်းပြည်နယ်မှ ပြည်သူလူထုများ စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်နေကြပါသည် ဟူ၍သတင်းရရှိပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, November 04, 2010 Links to this post
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဒဂုံမြို့သစ်မြို့နယ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ် စည်းရုံးရေး အဖွဲ့ဝင် ကိုအေးသွင်ကို တနာရီကျော်ကြာ ဖမ်းဆီးပြီးပြန်လွှတ်
မြန်မာစစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်များဟာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဒဂုံမြို့သစ်မြို့နယ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ် စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင် ကိုအေးသွင်ကို ၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီခန့်က ဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ ထိုသို့ ဖမ်းဆီးသွားရာမှာ ဆွေးနွေးစရာရှိလို့ဆိုပြီး ပြောဆိုသွားကာ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကင်မရာနဲ့ မဲ မပေးရေးလက်ကမ်းစာရွက်များကိုပါ သိမ်းဆည်းသွားပါတယ်။
မြန်မာအာဏာပိုင်တွေဟာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဒဂုံမြို့သစ်မြို့နယ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ် စည်းရုံးရေး အဖွဲ့ဝင် ကိုအေးသွင်ကို တနာရီကျော်ကြာ ဖမ်းဆီးပြီးနောက် ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့က အရာရှိများဟာ ကိုအေးသွင်ကို ဒဂုံမြို့သစ်မြို့နယ် (တောင်ပိုင်း) အမှတ် ၇၁ ရပ်ကွက်မှာ ဒေသစံတော်ချိန် မနက် ၁၀ နာရီခန့်က ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့ ဖမ်းဆီးပြီးနောက် အမှတ် ၇၁ ရပ်ကွက် အာဏာပိုင်ရုံးသို့ ခေါ်ဆောင်သွားကာ မေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ပြီး လှုပ်ရှားမှုများ မပြုလုပ်ပါဆိုတဲ့ ခံဝန်ချက် လက်မှတ် ရေးထိုးခိုင်းကြောင်း၊ ကိုအေးသွင်က လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ ငြင်းဆန်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာနဲ့ အသုံးပြုထားတဲ့ တယ်လီဖုန်းကဒ်တို့ကို သိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်း၊ တနာရီကျော် ဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက် မနက် ၁၁ နာရီကျော်မှာ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
ပြည်သူက အယုံအကြည်မရှိ အလိုမရှိတဲ့ နအဖလက်ပါးစေ ကြံ့ဖွတ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ မဲဆွယ်ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များအား မီးရှို့ဆန္ဒပြကြပြီ။
တိုင်းပြည်အား လိမ်လည်လှည့်ဖြားနေသော ယူနီဖောင်းချွတ် နအဖဗိုလ်ချူပ်များ ဦးဆောင်နေသည့် ကြံဖွတ်ပါတီအား ဆန့် ကျင်ကန့် ကွက်သည့်အနေဖြင့် မြောက်ဒဂုံမြို့ နယ်နှင့် လှိုင်သာယာမြို့ နယ်တို့ တွင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ကြံ့ဖွတ်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်လောင်းများ၏ ဆိုင်းဘုတ်များအား မီးရှို့ ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
နအဖတို့ ၏ အာဏာသက်တမ်းရှည်စေရေးအတွက် ပုံသွင်းဆောင်ရွက်နေသော ရွေးကောက်ပွဲအား ၄င်းတို့ ၏ ကြံ့ဖွတ်ပါတီအနိုင်ရရှိစေရန်အတွက် အမျိုးမျိုးသော လိမ်လှည်လှည့်ဖြားမှုများဖြင့် ကြံ့ဖွတ်ပါတီ အမတ် နအဖလက်ပါးစေများသည် တစ်ဘက်သတ် လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများ လက်ကိုင်ထားပြီး မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ ပြုလုပ်နေရာတွင် နေရာအသီးသီးတွင် ကြံ့ဖွတ်ပါတီဆိုင်းဘုတ်များ ကြံ့ဖွတ်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်လောင်းများ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုဆိုင်းဘုတ်များအား ပြည်သူလူထု အမြင်ကပ်ဖွယ် ဖေါ်ပြထားကြသည်ကို တွေ့ ရှိရသောကြောင့် အဆိုပါ နအဖလက်ပါးစေ ကြံ့ဖွတ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်းဘုတ်များအား မနေ့နံနက် (၅) နာရီအချိန်က ပြည်သူများမှ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးလိုက်ကြပါသည်။
မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခံရသော ကြံ့ဖွတ်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်လောင်းများ၏ မဲဆွယ်ဆိုင်းဘုတ်များမှာ မြောက်ဒဂုံမြို့ နယ် ၇၊ ၈ လမ်းဆုံရှိ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်နှစ်ခုနှင့် လှိုင်သာယာမြို့ နယ်ရှိ စက်မှုဇုံ အထည်ချူပ်စက်ရုံအနီးရှိ ဆိုင်းဘုတ်နှစ်ခုတို့ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဤကဲ့သို့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ရခြင်းမှာ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထုကို ညဉ်းပမ်းနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ကာ အနိုင်ကျင့်စော်ကားနေကြသော လူရမ်းကား အာဏာရူးများနှင့် လက်ပါးစေများမှ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ရာတွင် မုသားစကားအများအပြားဖြင့် လိမ်ညာပြောဆိုနေကြသောကြောင့် အဆိုပါ ကြံ့ဖွတ်ပါတီအား အယုံအကြည်မရှိ ဆန့်ကျင်ကြောင်း ပြသသည့်အနေဖြင့်သာမက နအဖနှင့် ကြံ့ဖွတ်ကိုယ်စားလှာ်အမတ်လောင်းများအား အခြားသော နအဖအလိုကျဆောင်ရွက်နေသူများအား သတိပေးသည့်အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ပြသလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ အတူ အဓမ္မ၀ါဒီ နအဖတို့ ကျင်းပသည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် ၄င်းတို့အာဏာသက်ဆိုးရှည်စေရေးမှတစ်ပါး စစ်မှန်သော ရွေးကောက်ပွဲ မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း သိသာစေရန် မီးမောင်းထိုးပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ မှ KNU ခေါင်းဆောင်များ၏နေအိမ်များသို့ ထိုင်းစစ်တပ်များဝင်ရောက်ရှာဖွေစစ်ဆေး
ဒီကနေ့ မနက် ၅ နာရီလောက်က ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့မှာ KNU ခေါင်းဆောင် ၆ ဦးရဲ့နေအိမ်တွေကို ထိုင်းစစ်တပ်က ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ ရှာဖွေ စစ်ဆေးခဲ့တယ် လို့ သိရပါတယ်။
KNU ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေမှာ လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက် သိုလှောင်ထားမှု ရှိ မရှိနဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေ ဝှက်ထားမှု ရှိ မရှိ ရှောင်တခင် ဝင်ရောက် စစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်လို့ ထိုင်းစစ်တပ်က ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ မြန်မာအစိုးရကို စိုးရိမ်မှုတွေ မဖြစ်စေချင်တဲ့အကြောင်း ဒါကြောင့်မို့ မြန်မာဘက်ကို သွားပြီး တိုက်ခိုက်မယ့်သူတွေ ပုန်းအောင်းနေတယ်လို့ သတင်းရထားတဲ့ နေရာ ၆ နေရာကို ရှာဖွေမှုတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ မသင်္ကာဖွယ်လူတွေနဲ့လက်နက်တွေတော့ မတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်း အခုရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ မဲဆောက်အခြေစိုက် အမှတ် ၄ ဒေသ ကွပ်ကဲရေးတပ်က ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ပရပ်ဆယ် ဆင်စီရီရပ်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာသူပုန်တွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံကို ခြေကုတ်ယူပြီး မြန်မာဘက်ကို သွားပြီး လှုပ်ရှားတာတွေကို လက်မခံတဲ့အကြောင်းကိုလည်း ဗိုလ်မှူးကြီး ပရပ်ဆယ် ဆင်စီရီရပ်က ပြောပါတယ်။
ဒီကိစ္စအတွက် KNU ဘက်ကို မေးမြန်းဖို့ ဘီဘီစီက ကြိုးပမ်းပေမယ့် ဆက်သွယ်လို့ မရခဲ့ပါဘူး။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်း ၂၂၀၀ ကျော် အကျဉ်းကျနေဆဲဖြစ်ကြောင်း အေအေပီပီ မှသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်း ၂၂၀၀ ကျော် အကျဉ်းကျနေဆဲဖြစ်ကြောင်း အေအေပီပီ မှသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်
၂၀၁၀ ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ (၃) ရက်။
ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်း ၂၂၀၀ ထက်မနည်း အချုပ်နှောင်ခံနေရသည့်အပြင် ယခု အပတ်တွင်ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်း မဲပေးခွင့်နှင့် နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လုံးဝပါဝင်နိုင်ခွင့်မရှိဘဲ အကျဉ်းကျလျှက်သာ ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) အေအေပီပီမှ ယနေ့ထုတ်ပြန်သော ရွေးကောက်ပွဲ အထူးအစီရင်ခံစာတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အနည်းဆုံး ၄၅ ဦးသည် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ နှစ်ခုစလုံးအား အကျဉ်းစံများအဖြစ် ဖြတ်သန်းကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
“စိတ်မကောင်းစရာတခုက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အနည်းဆုံး ၃၀ လောက်က ၁၉၉၀ မတိုင်ခင်ကတည်းက အကျဉ်းကျနေကြတာဖြစ်ပြီး ထောင်ထဲမှာ အနှစ် ၂၀ ကျော် နေနေကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်” ဟု အေအေပီပီ တွဲဘက် အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ကိုဘိုကြည်မှ ပြောဆိုပါသည်။
အစီရင်ခံစာတွင် စစ်အစိုးရမှ အတိုက်အခံများအား ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်ကွပ်သည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုကာလအတွင်း နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများနှင့် ၄င်းတို့၏အခြေခံရပိုင်ခွင့်များကို ငြိမ်းချမ်းစွာဖွင့်ဟဖော်ထုတ်သော သာမန်ပြည်သူများအား ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထောင်ချနေမှုများ၊ ဟန့်တားနှောက်ယှက် ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်မှုများ၊ နှိပ်စက် ညှဉ်းပမ်းမှုများအား လှစ်ဟပြထားပါသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်းတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အရေအတွက် တိုးလာရုံသာမက နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းခြင်းနှင့် ဆိုးဝါးလှသည့် ထောင်အခြေအနေများအောက်တွင် ချုပ်နှောင်ထားမှုများ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။
“အကြမ်းဖက်မှု၊ အနိုင်ကျင့်နှောက်ယှက်မှုနဲ့ ဥပဒေမဲ့ စိတ်ထင်တိုင်းဖမ်းဆီးမှုတွေ ဆက်ဖြစ်- ပိုဖြစ်လာတဲ့အတွက် လွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမျိုး ဘယ်လိုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံထဲက လူဦးရေသန်းပေါင်း ၅၀ ကျော်ရဲ့ဘ၀တွေ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ရမယ့်အစား နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့မှာ စစ်အစိုးရကကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲတွေကြောင့် ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ခြိမ်းခြောက်အနိုင်ကျင့်မှုတွေ ပိုမို ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။” ဟု အေအေပီပီ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုး ကိုဘိုကြည်က ပြောပြပါသည်။
ယမန်နှစ်တွင်လည်း ထောင်အခြေအနေနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအခြေအနေ တိုးတက်မှု လုံးဝ မရှိကြောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် သဘောထားအမြင် ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ပြီး အခြားသူများအား ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက် ဗဟုသုတများ လက်ဆင့်ကမ်းသဖြင့် လူအများ အဖမ်းဆီးခံ နှိပ်စက်ခံ အကျဉ်းချ ခံနေကြရကြောင်း၊ စက်တင်ဘာလထဲတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး စာရွက်စာတမ်းများ ဖြန့်ဝေမှုဖြင့် ကျောင်းသား ၁၁ ဦး အဖမ်းခံခဲ့ရကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင်ဖေါ်ပြပါရှိပါသည်။
“ပြည်သူလူထုကို သူတို့ အခွင့်အရေးတွေအကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းပညာပေး ပြောပြလို့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေမှတော့ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ လွတ်လပ် တရားမျှတမှုအပေါ် ကျနော်တို့ ဘာပြောလို့ ရတော့မှာလဲ”“ခေါင်းဆောင်အများစုက အကျဉ်းကျနေကြဆဲဆိုတော့ တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင် မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ သူတို့နှစ် သက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် မဲပေးခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။
စစ်အစိုးရက နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းကို သူတို့အနေနဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ အယုံသွင်းဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ တိုင်းပြည် အပြောင်းအလဲအတွက် အမှန်တကယ် စိတ်စေတနာကောင်းရှိတယ်ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးခွန်ထွန်းဦးတို့ အပါအ၀င် အခြားအရေးပါတဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို ထောင်ကပြန်လွှတ်ပေးပြီး အချုပ်အချယ် အကန့်အသတ်မရှိပဲ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ပြုထားပြီးသား ဖြစ်ရမှာပေါ့” ဟု ကိုဘိုကြည်မှ ဆိုပါသည်။
အသေးစိတ် ထပ်မံသိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်ရန်
ကိုဘိုကြည် (တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး) +၆၆ ၀၈၁ ၉၆၂ ၈၇၁၃
၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲအားအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲ အခမ်းအနား...ဓာတ်ပုံ၊ သတင်း
၃၊၁၁၊၂၀၁၀ ရက်နေ့ တွင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများက လာမည့်နိုင်ဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ တွင် နအဖ စစ်အစိုးရအနေနှင့် အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ မြန်မာ့ဒီမို ကရေစီအင်အားစုများက ဂျန်တားမန်းတား တွင် ဆိုလိုဂမ်များသီဆို၍ လမ်းလျှောက်ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်..... ထိုန္ဒပြပွဲတွင် လူပေါင်း (၇၀၀) ကျော်တက်ရောက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်လို့သိရှိခဲ့သည်။
မန္တလေးမြို့တွင် အင်တာနက်ဆိုင်များ ခေတ္တပိတ်ထား
မန္တလေးမြို့တွင် အင်တာနက်လိုင်းများ ဆက်သွယ်မှု ပြတ်တောက်ခြင်းကြောင့် အင်တာနက်ဆိုင်အချို့ ခေတ္တပိတ်ထားရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ “လိုင်းတွေက သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ မတိုင်မီ အဖိတ်နေ့ ကတည်းက ကျနေတာပါ။ လပြည့်နေ့ကျတော့ မရတော့တာ။ အခုချိန်ထိပဲ။ ဆိုင်တွေတော်တော်များများ ပိတ်ထားကြတယ်”ဟု အင်တာနက်ဆိုင်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ရုံးသုံးစာများကိုလည်း အီးမေးလ် ပို့မရသောကြောင့် အမြန်ချောပို့လုပ်ငန်းများ၊ ကားဂိတ်များ၊ ဖက်စ်ပို့ခြင်းများဖြင့် ပေးပို့နေရကြောင်း ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း တစ်ဦးက ပြောသည်။ “လိုင်းတွေကျနေတော့ ဆိုင်ရဲဝင်ငွေကို တော်တော်ထိခိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆိုင်ခန်းက ငှားခတွေ၊ ၀န်ထမ်းစရိတ်တွေကလည်း ရှိနေတော့ ဒုက္ခရောက်တာပေါ့”ဟု မန္တလေးတက္ကသိုလ် အနီးရှိ အင်တာနက်ဆိုင် ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ မန္တလေးမြို့တွင် အင်တာနက်ဆိုင်ပေါင်း ၁၃၀ ၀န်းကျင်ခန့်ရှိပြီး မန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီးနှင့် ၇၃ လမ်းမ တစ်လျှောက်တွင် အများဆုံး ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း7Day News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း(မြန်မာနိုင်ငံ) ရွေးကောက်ပွဲ အထူးအစီရင်ခံစာ
Silencing Dissent Burmese
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, November 03, 2010 Links to this post
နအဖ ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲ မှာ ကြံ့ဖွတ် ပါတီ က လာဒ်ပေးစည်းရုံး မှုပြုလုပ်နေသောပါတီတစ်ခုဟု စည်းကမ်းဘောင်ထဲကလုပ်ကိုင်နေတဲ့ တစည ပါတီ ကပြောကြား
ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်ဖို့ ရက်ပိုင်းလောက်ပဲ လိုတော့ချိန်မှာ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေရဲ့ မဲဆွယ် စည်းရုံးခွင့် တွေကို ဒေသ ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် တွေက လိုက်ပြီး ကန့်သတ် နေတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်နေ ပေမဲ့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင် ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင် တွေ ကတော့ အကြီး အကျယ် ဆက်ပြီး မဲဆွယ်နေ ကြပါတယ်။
လက်ရှိ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် အပါအဝင် အစိုးရ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ကြမယ့် နေပြည်တော်မှာ ငွေအင်အား လူအင်အားနဲ့ မဲဆွယ် စည်းရုံး နေလို့ သူတို့နဲ့ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ပါတီတွေ အခက် အခဲ ရှိနေတယ်လို့ သူတို့နဲ့ အဓိက ပြိုင်ဖက် တိုင်း ရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ပါတီ (တစည)က ပြောပါတယ်။
ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးးရေး ပါတီက တော့ ရာထူး အရှိန် အဝါနဲ့ ငွေအင်အား တွေကို သုံးပြီး မဲဆွယ် နေတာ ကြောင့် စည်းကမ်း ဘောင်ထဲက လုပ် ကိုင် နေတဲ့ သူတို့ တစည ပါတီ အနေနဲ့ အတော် ကြိုးစား လုပ်ဆောင် နေရ တယ်လို့ လယ်ဝေး မြို့နယ် အမျိုးသား လွှတ်တော် ကနေ ဝင်ရောက် အရွေးခံမယ့် အသက် ၇၃ နှစ် အရွယ် ဦးစိုးတင့်မောင် က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ကဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်ပေးတာ၊ တယ်လီဖုန်း တို့ ဆိုင်ကယ်တို့ ထုတ်ပေးတာ အပြင် ငွေကြေး ထုတ်ပေး တာတွေလုပ်ပြီး စည်းရုံး နေတာ လူအများ သိတယ်လို့ လည်း ဦးစိုးတင့်မောင်က ပြောပါတယ်။
သူတို့ အနေနဲ့ကတော့ ဝန်ထမ်းတွေ ကြားနဲ့ မြို့ပေါ် ရပ်ကွက်တွေ ကြားထဲ ဝင်ရောက် စည်းရုံးရေး မလုပ်နိုင်လို့ ကျေးလက်ကို အဓိက ထား စည်းရုံး နေရတယ် ကျေးလက် ဒေသမှာ သူတို့ကို ထောက်ခံ သူတွေ များပြီး၊ အင်အား များတယ် လို့လည်း သူက ဆက် ပြောပါတယ်။
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Wednesday, November 03, 2010 Links to this post
ကြိုတင်မဲပေးစေခြင်းတွင် စည်းမျဉ်းများ ကိုကျော်၍ တစ်ဖက်စောင်းနင်း မဲထည့်စေခြင်းများ ရှိနေသည်ဟု တစည ပါတီကန့်ကွက်သောကြောင့် ရပ်ဆိုင်းထားကြောင်းသိရ
ပင်လယ်ပြင်သို့ ငါးဖမ်းထွက်ခွာမည့် ငါးဖမ်းလှေလုပ်သားများအား ကြိုတင်မဲပေးစေခြင်းတွင် စည်းမျဉ်းများကိုကျော်၍ တစ်ဖက်စောင်းနင်း မဲထည့်စေခြင်းများရှိနေသည်ဟု မြိတ်မြို့နယ် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီမှ ကန့်ကွက်ခဲ့သောကြောင့် ကြိုတင်မဲပေးခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းထားစေကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပါတီဝင်များထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ပင်လယ်ပြင်သို့ ငါးဖမ်းထွက်ခွာမည့် ငါးဖမ်းလှေလုပ်သားများအား ကြိုတင်မဲပေးစေခြင်းကို ၁-၁၁-၂၀၁၀ နေ့မှစတင်၍ ရပ်ဆိုင်းထားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့ (နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်)တွင်ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးနိုင်ရန်အတွက် မြိတ်ကျွန်းစုတွင် ငါးဖမ်းဆီးခြင်းကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ငါးဖမ်းလှေများမှ လှေလုပ်သားများအား ကြိုတင်မဲပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်သို့ ငါးဖမ်းထွက်ခွာမည့် ရေလုပ်သားများကို ၂၉-၁၀-၂၀၁၀ မှစတင်ကာ ကြိုတင်မဲပေးစေကာ ငါးဖမ်းထွက်ခွာခွင့် ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သို့ရာတွင် အဆိုပါကြိုတင်မဲပေးသည့် စနစ်ကို ၃၁-၁၀-၂၀၁၀ နေ့က အထိသာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၁-၁၁-၂၀၁၀ နေ့တွင် ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ “ပင်လယ်ပြင်သို့ ငါးဖမ်းထွက်ခွာမယ့် လှေတွေက ရေလုပ်သားတွေကို ကြိုတင်မဲပေးနိုင်အောင် တာဝန်ရှိသူတွေက စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့ကစပြီး Check Point မှာကြိုတင်မဲပေးပြီး ပင်လယ်ပြင်ကိုထွက်ခွာနိုင်မယ်”ဟု ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် ကြိုတင်မဲပေးမှု၌ ရေလုပ်သားများအား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုကျော်ကာ တစ်ဖက်စောင်းလုပ်ဆောင်မှုများ ရှိနေသည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာသည့် အတွက် ပြိုင်ဘက်ပါတီများမှ တာဝန်ရှိသူများက အဆိုပါ ကြိုတင်မဲပေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်နေသည့် နေရာသို့ သွားရောက်ကြည့် ရှုခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ “အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့နဲ့ ၃၁ ရက်နေ့တွေမှာ ဒီလိုသတင်းတွေ ထွက်လာလို့ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကြိုတင်မဲပေးတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငါးလေလံဈေးနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ပါတီက သတင်းပေးပို့မှုတွေလုပ်နိုင်အောင် လူတွေလွှတ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရောက်တဲ့အခါမှာ ကြားတဲ့အတိုင်းပဲ တစ်ဖက်စောင်း လုပ်ဆောင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို တရားမျှတအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာ အခုလိုစည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုတွေကို အောက်ခြေမှာ လုပ်နေတာတွေ့ရတဲ့ အတွက် ကျင်းပပေးတဲ့သူတွေ ကိုလည်း ထိပါးရာရောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဒါကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပါတီအနေနဲ့ တိုင်းကော်မရှင်ကိုလည်း စာပို့ပါတယ်။ ရန်ကုန်ရုံးချုပ် ကိုလည်းစာပို့ပါတယ်။
နေပြည်တော်ဗဟိုကော်မရှင်အထိ စာပို့ပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဆီကို ကြိုတင်မဲပေးတဲ့ကိစ္စရပ်ဆိုင်းထားတဲ့ စာမရောက်သေးပေမယ့် ၁-၁၁-၂၀၁၀ နေ့ကစပြီး ငါးလေလံဈေးမှာ ကြိုတင်မဲပေးနေတဲ့ကိစ္စတွေကို ရပ်ဆိုင်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တစ်ဖက်ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ယောက်က ကြိုတင်မဲပေးတဲ့ နေရာအထိ ၀င်ရောက်လာပြီး သူတို့ပါတီကို ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒ မပါဘဲ ၀င်ရောက်ကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်သွားတယ်ဆိုတာ သိထားရတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ပါတီအနေနဲ့ အခုအချိန်မှာရော ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာရော အခုလိုပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲ အတင်းအကျပ်လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ကန့်ကွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု မြိတ်မြို့နယ် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ပင်လယ်ပြင်အတွင်းသို့ ငါးဖမ်းထွက်ခွာမည့် လှေများမှာ အများအားဖြင့် ပင်လယ်ပြင်သို့ ငါးဖမ်းတစ်ခါ ထွက်လျှင် ပျမ်းမျှ ရက် ၄၀ ကျော်မျှကြာမြင့်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့အတွက် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ငါးဖမ်းထွက်ခွာမည့်လှေများမှာ ရွေးကောက် ပွဲကိုမမီနိုင်တော့ကြောင်း သိရသည်။ ကြိုတင်မဲပေးသည့် ပထမရက်တွင် ငါးဖမ်းလုပ်သားများမှာ မိမိတို့ဆန္ဒအရ မဲထည့် သွားနိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း နောက်ရက်များမှစတင်ကာ ဖိအားပေးစေခိုင်း သူများရှိလာခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ “ပထမရက်တုန်းက ရေလုပ်သားတွေဟာ သူတို့ဆန္ဒအတိုင်း မဲထည့်ခွင့်ရခဲ့ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်ရက်တွေမှာ ရေလုပ်သားတွေကို သူတို့ထည့်နေတဲ့ ပါတီဟာ မှားနေတဲ့အကြောင်း အခုအချိန်ကစပြီး ဒီတံဆိပ်ကိုပဲမှတ်ထားပြီး မဲထည့်ဖို့လိုမယ်ဆိုပြီး ရေလုပ်သားတွေရဲ့ အင်္ကျီမှာ သူတို့ပါတီတံဆိပ်တွေကို လိုက်တပ်ပေးတယ်။ သူတို့အနေနဲ့လည်း ရေလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ အတော်များများကို ချုပ်ကိုင်ထားပြီး သူတို့ပတ်သက်ရာ ပတ်သက်ကြောင်းတွေကို ဖိအားပေးထားကြပါတယ်။ ငါးလေလံဈေးမှာ အဲဒီနေ့တုန်းက တံဆိပ်လေးတွေတပ်ပေးထားပြီး ကြိုတင်မဲပေးဖို့ စောင့်ခိုင်းထားတဲ့ ရေလုပ်သားတွေဟာ ၈၀၀ လောက်ရှိလိမ့်မယ်” ဟု ငါးလေလံဈေးသို့ ရောက်ခဲ့သူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ကြိုတင်မဲပေးသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တစ်ဖက်စောင်းလုပ်ကာ လုပ်ဆောင်နေသူများအား သတင်းပေးပို့ခြင်းမှုများကို ကော့သောင်း၊ ဘုတ်ပြင်း၊ သင်္ကထီး၊ အင်္ဂမော်စသောနေရာများမှာ လက်ခံရရှိထားကြောင်း တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ မြိတ်မြို့နယ်တွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပါတီများမှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနှင့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီတို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်ဟု news-eleven.တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်.။
စစ်အာဏာ နအဖ တို့၏ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုသပိတ်မှောက်ဆန့်ကျင်ကြပါစို့
ဒုတိယပင်လုံညီလာခံမှသည် စစ်မှန်သော ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသို့ အပုိုင်း ၁ ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ
လွန်ခဲ့သည့် စနေနေ့ မနက်ခင်းက မြန်မာပြည်၏ အတုိုက်အခံခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်သူ အင်န်အယ်ဒီပါတီ၏ ဦးဆောင်သူ၊ ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်နှင့် တွေ့ဆုံ စကားပြောဖြစ်ခဲ့သည်။ အဓိကမေးခွန်းများမှာ -
ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာ ဒုတိယပင်လုံညီလာခံခေါ်ဖို့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲက အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးအတူတူ သာတူညီမျှ ရရှိရမယ့် အခွင့်အရေးတွေ ဖြစ်တယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေ တောင်းဆိုတာက တန်းတူညီမျှခွင့်တို့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တို့ဖြစ်တယ်။ စစ်အစုိးရက ဘာပေးတာလဲဆိုတော့ - ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ဆိုတာမျိုးပဲ ပေးတယ်၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကို မပေးဘူး။ နောက်ပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံး လိုချင်တာက နိုင်ငံရေးအရ တန်းတူညီမျှတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါအစား စစ်အစုိုးရက အုပ်ချုပ်ရေးယန္တားထဲမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်တို့၊ စီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်တို့တွေကိုပဲ ပေးထားတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါတွေကို ကျနော်တို့က ခွဲခြားပြီး သိရမယ်။
ပေးပို့ ပေးသော ကိုမောင်ရစ် အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, November 02, 2010 Links to this post
ကိုစံဇာဏီဘို က ဒီလိုပြောကြားခဲ့တဲ့ နအဖ ရဲ့ အလံသစ် အကြောင်း .(ရုပ်သံ)
နအဖ ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဟာ လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတသည်သာအာဏာပိုင်တွေပြောနေတာ လက်တွေ့မှာနဲ့တခြားစီပါ..
ဦးသန်းရွှေ ပြောပြောနေတဲ့ ခေတ်မှီတိုးတက်တဲ့စက်မှုနိုင်ငံတော်ကြီးမှာခုလိုလေယာဉ်ဘီးကျွံတာလောက်များ အခုလိုလုပ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ ဓာတ်ပုံ သတင်း
ကဲ ဘယ်လောက်အဆင်ပြေ သွားလဲ ကြည့်ကြပါအုံး...ရွာကနွားလှည်းဘီးကျွံ သလိုပေါ့ ခုလို လုပ်လိုက်တော့လဲ ရတာဘဲတဲ့..၊ မြန်မာပြည်က သိပ်ကိုခေတ်မှီတိုးတက် နေတဲ့ စက်မှု နိုင်ငံတော်ကြီးလို့ နအဖ ရဲ့ ပြောစကား ယုံပြီး မဟုတ်လား..။
ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း (TG) ပိုင် Air Bus A-300 လေယာဉ်တစ်စင်း
ဦးသန်းရွှေ ရဲ့ ခေတ်မှီ တိုးတက်နေတဲ့ စက်မှု နိုင်ငံတော်ကြီး ရဲ့ ပေါများလှတဲ့ လမ်းအက်ကြောင်းတွေ
လေယာဉ်ပျံ ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့ စဉ်းစားနေကြပုံ နောက်ဆုံးတော့ လည်း မြန်မာပြည်မှာ ခဏခဏ ဘီးတွေ ကျွံနေတာ လုပ်နေကျဘဲကွာ ထုံးစံ အတိုင်းဘဲပေါ့ ချိုင့်ခွက်တွေထဲ ကျနေတဲ့
လှည်းဘီး ကို လုပ်သလိုသာ လုပ်လိုက်ပေတော့ တဲ့..။
ယနေ့ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း(TG) ပိုင်Air Bus A-300လေယာဉ်တွင်ခရီးသည်အပြည့်တင်ဆောင်လာပြီးရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ ဆင်းလာစဉ်လေယာဉ်သွားလမ်းပေါ်၌ဘီးကျွံကျမှုဖြစ်ပွား
ခရီးသည်အပြည့်တင်ဆောင်လာသည့် ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း (TG) ပိုင် Air Bus A-300 လေယာဉ်တစ်စင်း ၂၀၁၀ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ ဆင်းသက်ရပ်နားစဉ် လေယာဉ်သွားလမ်းပေါ်၌ ဘီးကျွံကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း လေဆိပ်အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် နီးစပ်သူများထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ခရီးသည် ၂၆၀ကျော် ထိုင်ခုံ အပြည့်တင်ဆောင်လာခဲ့သည့် အဆိုပါလေယာဉ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှ ရန်ကုန်သို့ ထိုင်းစံတော်ချိန် နံနက်၈နာရီ မိနစ် ၃၀ ခန့် တွင်ထွက်ခွာခဲ့ကာ ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ ဆင်းသက်အပြီးလေယာဉ်သွားလမ်းပေါ်၌ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၉နာရီ ၁၅မိနစ် ခန့်တွင် ဘီးကျွံကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
"အရှိန်နဲ့လေယာဉ်ဆင်းလာ တုန်းကျွံကျတာမဟုတ်ပါဘူး။ လေယာဉ်ပြေးလမ်းပေါ်ကနေ လေဆိပ်ကိုအ၀င် လေယာဉ်သွားလမ်း(Taxi Way) ပေါ်မှာဖြစ်တာပါ။ ပြောရရင် လေဆိပ်ဆီကိုသွားဖို့ ညာကွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ လေယာဉ်ရဲ့ညာဘက်နောက်ဘီးဟာ Taxi Way ရဲ့ ဘေးနှုတ်ခမ်းသားကို နင်းမိလိုက်ချိန်မှာ ကျွံကျပြီး ဘေးက မြောင်းထဲမှာတော်တော်နစ်ဝင်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်"ဟု လေယာဉ်မှူးကြီးတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုမှ ၀ါရင့်လေယာဉ်မှူးကြီး တစ်ဦးကလည်း "ဒီဖြစ်ရပ်ကိုကြည့်ရင် လေယာဉ်မှူးပေါ့ဆတာလည်း ပါပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Taxi Way ကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့နှစ်က အရမ်းကြာနေပါပြီ။ ကျွန်တော် လေယာဉ် စမောင်းချိန် ၁၉၇၆ခုနှစ် မတိုင်ကတည်းက သုံးနေခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ ဒီတော့ လေယာဉ်သွားလမ်းအနေအထားရယ်၊ လေယာဉ်မှူး ပေါ့ဆမှုရယ်စသဖြင့် အချက်တွေ အများကြီးစုံ သွားလို့ဖြစ်နိုင်တာပါပဲ"ဟု သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုင်း လေကြောင်းလိုင်း သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်း ခဲ့ရာတွင် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကရန်ကုန်လေဆိပ်သို့သာဆက်သွယ်မေးမြန်းရန် ဖြေကြားခဲ့ခြင်းကြောင့် နိုဝင်ဘာလ ၁ရက်နေ့ ညနေ ငါးနာရီအချိန်တွင် မေးမြန်းခဲ့ရာ လေယာဉ်ဘီးအားပြန်လည်တင်ဆောင်ရန် သက်ဆိုင်ရာမှကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဘီးကျွံကျမှုကြောင့် ခရီးသည်များ တစ်စုံတစ်ရာထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည့်သတင်းအား news-eleven ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်.။
ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ကလေးမြို့ကြေငြာစာတမ်းအပေါ်သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, November 01, 2010 Links to this post
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် ကော်မတီဝင်ဦးဝင်းတင်အားအမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးသူရဲကောင်းဆုချီးမြှင့်ခြင်းဓာတ်ပုံသတင်း
အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက် မနေ့ က စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့မှာ ကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့ ဇိုမီး အမျိုးသားကွန်ဂရက် တည်ထောင်ခြင်း ၂၂ နှစ်မြောက် အခမ်းအနားမှာ NLD ပါတီ က ဗဟို ကော်မတီဝင် ဦးဝင်းတင်ကို အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆောင်ရွက်သူ သူရဲကောင်းအဖြစ် ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆုကို ဦးဝင်းတင်ကိုယ်စား ချင်းပြည်နယ် စည်းရုံးရေးခရီးစဉ် သွားရောက်တဲ့ NLD ပါတီဝင်တွေက လက်ခံယူခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆုချီးမြှင့်ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ဂရက်က ဥက္ကဋ္ဌ ဦးပူကျင်ရှင်းထန်က ခုလိုပြောပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ဒီခေတ်ဒီချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ အခြေခံဥပဒေလည်း ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုအတွက် ဘာမှ အကြောင်းထူးမှာ မဟုတ်ဖူး။ ဒါ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တည်မြဲဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ အခု ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုတာလည်းပဲ အဲဒီ အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုဖို့ ဖြစ်နေတော့ အကြောင်းထူးမှာ မဟုတ်ဖူး။ တကယ် အကြောင်းထူးဖို့ လိုတာက အမျိုသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ဖို့က အရေးအကြီးဆုံးပဲ။ အဲဒီမှာ အဓိက ကျွန်တော်တို့ အားကိုးအားထားရတဲ့ လူတွေက ဦးဝင်းတင်တို့၊ ဦးတင်ဦးတို့ ပြည်သူလူထုကို စည်းရုံးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ အဲဒီ အမြင်နဲ့ သူ့ကို ဒီဆုကို အပ်နှင်းတာပါ။
ဇိုမီးအမျိုးသား ကွန်ဂရက်အနေနဲ့ အလားတူဆုကို NLDပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦိးကိုလည်း ချီးမြှင့်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဦးတင်ဦး နေအိမ် အကျယ်ချုပ်က လွတ်လာတဲ့ အချိန်က ဝါရင့် နိုင်ငံရေးသမားကြီးများအဖွဲ့နဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များက ကြိုဆိုပွဲ လုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ အဲဒီနေ့က ချင်းအမျိုးသားနေ့နဲ့ တိုက်ဆိုင်တာကြောင့် ဦးတင်ဦးကိုလည်း အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး သူရဲကောင်းဆုကို ဇိုမီး အမျိုးသားကွန်ဂရက်က ပထမဆုံး ချီးမြှင့်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အမှန်တရားအတွက် ရင်ဆိုင်မယ့် အဖွဲ့ချုပ်လူငယ် အဖွဲ့ဝင်တွေပါ.
ပေးပို့ ပေးတဲ့ ညီ နှင့် အရှင်ထာဝရ အား ကျေးဇူးတင်ပါသည်..။
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Monday, November 01, 2010 Links to this post
မဲရုံကိုမသွားပါနဲ့ မဲမပေးပါနဲ့ လို့ ပြောတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်သတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
ခုဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့တပတ်ကျော်ပဲ လိုပါတော့တယ်။ ဒီအချိန်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်နေတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ သဘောထားကို ထပ်မံ သိရှိနိုင်ဖို့ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးဝင်းတင်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာပါ။
ရွေးကောက်ပွဲကလည်း နီးကပ်လာပြီဆိုတော့ ထပ်ပြီး အဖွဲ့ချုပ်ကလည်း ဆန့်ကျင် သပိတ်မှောက်ထားတယ်ဆိုတော့ ဘာကြောင့် အဓိကအားဖြင့် ဆန့်ကျင် သပိတ်မှောက်ရတယ် ဆိုတဲ့ အချက်လေးတွေ ပြန်ပြီး ရှင်းပြစေချင်တာပါဗျာ။ အရပ်စကားနဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင် ထမင်းဝိုင်းကြီးကျွေးတယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့လည်း ထမင်းဆာနေကြတယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့လည်း ဒီမိုကရေစီကို လိုလားတောင့်တနေတယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့ လိုလားနေသလို ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်တဲ့သူလည်း လိုလားတယ်။ ပြည်သူတွေလည်း လိုလားတယ်။ အကုန်လုံးလိုလားနေတဲ့ အချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ ထမင်းဝိုင်းကြီးကို ချကျွေးရင် ကျနော်တို့ စားမှာ ပေါ့ဗျ။ သို့သော် အဆိပ်ခပ်ထားတဲ့ ထမင်းပွဲဆိုရင် ကျနော်တို့ မစားနိုင်ဘူး။ စားလို့မဖြစ်ဘူး။ အခုလည်း ဒါပဲ။ ဒီထမင်းပွဲဟာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုတာဟာ ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေဆိုတဲ့ အဆိပ်ခပ်ထားတဲ့ ထမင်းပွဲကြီးကျနော်တို့ ငြင်းပယ်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ သပိတ်မှောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကို အောင်မြင်အောင် ဘဘတို့ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်သွားမှာလဲ ခင်ဗျ။
ဒီသပိတ်ကို ကောင်းပြီ။ ကျနော်တို့ ဘယ်လို အကောင်အထည်ဖော်မလဲ။ ကောင်းပြီ။ ၂ ခုပဲရှိတယ်။ (၁) မဲရုံကိုမသွားပါနဲ့။ မဲမပေးပါနဲ့။ (၂) မဲရုံကို အကြောင်းကြောင်းကြောင့်သွားရမယ်ဆိုရင် လိမ်မာစွာနဲ့ လူမသိသူမသိ ပယ်မဲ ဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။ ဒီ ၂ ခုပဲ။ ကျနော်တို့က ဘယ်သူ့ကို မဲမပေးပါနဲ့ မပြောဘူး။ အန်ဒီအက်ဖ်ကို မဲမပေးပါနဲ့ မပြောဘူး။ ကျနော်တို့ အန်ဒီအက်ဖ်ကို စကားထဲ ထည့်မပြောဘူး။ အစိုးရနဲ့ အတူတူပေါင်းပြီးတော့ လုပ်နေတဲ့သူတွေ၊ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ လက်ခံတဲ့သူတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲကို လက်ခံတဲ့သူတွေ၊ အလားတူ ဦးသုဝေရဲ့ ပါတီသော်လည်းကောင်း၊ အကုန်လုံး အတူတူပဲ။ ကြံ့ဖွံ့နဲ့ တသားတည်း၊ တတန်းတည်း လူတွေ ရယ်လို့ ကျနော်တို့ သတ်မှတ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကြံ့ဖွံ့ကို မဲမပေးပါနဲ့ မပြောဘူး။ တစညကို မဲမပေးပါနဲ့ မပြောဘူး။ အန်ဒီအက်ဖ်ကို မဲမပေးပါနဲ့လို့မပြောပါဘူး၊ ရွေးကောက်ပွဲ တခုလုံးကို သပိတ်မှောက်ပါ။ ကျနော်တို့ သုံးတဲ့စကားက လုံးဝဥဿုံ သပိတ်မှောက်တယ်ဆိုတဲ့ နည်းကို သုံးပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ ဆန့်ကျင်ရမယ်၊ သပိတ်မှောက်ရမယ်၊ အဖွဲ့ချုပ်က ချထားတာပေါ့နော်။ ဒါကို လူအများစုက လက်သင့်ခံမယ်လို့ရော ယုံကြည်ပါသလားခင်ဗျ။
ကျနော်တို့ရဲ့ စည်းရုံးမှုအားလည်း ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ အပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုအားလည်း ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးသိက္ခာဆိုတာလည်း ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပြောနိုင်တဲ့ အနေအထား၊ ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ အနေအထား၊ ရှေ့ဆောင်နိုင်တဲ့ အနေအထားရှိပါတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း လူထုက လက်ခံပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ထပ်မေးချင်တာက တချို့ကလည်း ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီမိုကရေစီကို သွားမှာပဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲကို ဖြတ်ရမယ် ဒီမိုကရေစီဆိုရင်။ အဲတော့ ရွေးကောက်ပွဲကြီးက လုံးလုံးကြီးပေါ့၊ ဒီမိုကရေစီကို ပြောင်းပြန်ကြီး လှန်ပြီးပြောင်းမသွားပေမယ့် နည်းနည်းတော့ ဒီမိုကရေစီကို ဦးတည်ပြီးတော့ သွားမယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်။ သူတို့ဥပမာပေးတာက က ကြီးကို ယ ဖြစ်အောင် မလုပ်နိုင်ပေမယ့် ၀ လုံးကိုတော့ ဗ လောက်လေးဖြစ်အောင် နည်းနည်းလေးတော့ချိုင့်နိုင်သေးတယ်ဆိုပြီး ပြောနေတာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာရော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ဘာများ ဝေဖန်ချင်ပါသလဲခင်ဗျ။
အဲဒါကတော့ စကားပမာတွေ ပြောနေကြတာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီအခြေအနေက ဘာလဲ၊ နောက်အခြေအနေကဘာလဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလဆိုတဲ့စကားကို ကျနော်တို့ ပထမနားလည်ဖို့လိုတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဒီမိုကရေစီအတွက် ဖြတ်သန်းတယ်၊ လိုအပ်တယ်။ သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလကို ထည့်တွက်ရဲ့လား။ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ စကားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာ အိုဘားမားကိုယ်တိုင် ပြောတဲ့စကား ရှိဖူးပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့အဖြေလည်းမဟုတ်ဘူး၊ ပြဿနာလည်းမဟုတ်ဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလမှာ ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲဟာ အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ ခုနကပြောတဲ့ ၀ ကို ဗလချိုင့် ပဲဖြစ်ဖြစ်ယပလက် ကကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ထဆင်ထူး ပဲဖြစ်ဖြစ် ၀လုံး ၀ိ ပဲဖြစ်ဖြစ် ထားချင်တာထား။ ဆိုလိုတာကတော့ ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလမှာ ဘာဖြစ်လာမလဲ။ ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအတိုင်းပဲ၊ စစ်အာဏာရှင်များဟာ ဆက်ပြီးတော့ စိုးမိုးနေမယ်။ ကြီးစိုးနေမယ်။ သူတို့ခြယ်လှယ်နေမယ်။ သူတို့စိတ်တိုင်းကျ လုပ်နေနိုင်တဲ့အနေအထား။ အဲလိုဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှမရှိဘူး။ သူတို့ဟာသူတို့ထင်ပြီးတော့ လွှတ်တော်ထဲမှာ လက်ညိုးထောင်ခေါင်းညိတ်အခြေအနေမျိုးကို ရောက်မှာပဲ။
ဘဘဦးဝင်းတင်အနေနဲ့ ၇ ရက် ၈ ရက်မှာ ဖြစ်လာတော့မယ့် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြည်သူတွေသိအောင်၊ ကျနော်တို့ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံကနေ ပြောချင်တာ ဘာများရှိသေးလဲ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့။
ထပ်ပြောချင်တဲ့စကားက မဲရုံတွေကိုမသွားပါနဲ့၊ မဲမပေးပါနဲ့၊ မဲရုံထဲကို မသွားမနေရ ဆွဲသွင်းရင်လည်း ပယ်မဲဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါ။ အဲဒါပဲ ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်။
နအဖ ရဲ့ မတရားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌဦးသိန်းစိုး ရွေးကောက်ပွဲ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု
လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြား ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က သံတမန်များ၊ ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဌာန ကိုယ်စားလှယ်များ၊ သတင်းစာဆရာများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အတွင်းရေးမှူးများအား ရွေးကောက်ပွဲကြို တင်ပြင်ဆင်မှု လုပ်ငန်းများ ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ဆန္ဒမဲပေးမှု သရုပ်ပြခြင်း အခမ်းအနားကို (၂ဝ၁ဝ)ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာ (၁၉)ရက်၊ နံနက်(၉)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကောမရှင်ဥက္ကဌ ဦးသိန်းစိုးနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲအတွင်းရေးမှူးများ၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ သံတမန်အဖွဲ့နာယက စင်ကာပူသမ္မတ နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့် နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံး ယာယီတာဝန်ခံများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ကုလ သမဂ္ဂလက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဌာနကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ စာပေနှင့်စာနယ်ဇင်း အဖွဲ့မှ အတွင်းရေး မှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းထောက်များ အသင်းမှ အသင်းဝင် သတင်းထောက်များ၊ ပြည်တွင်းဂျာနယ်နှင့် မဂ္ဂဇင်းများမှ စာတည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် သတင်းထောက်များ၊ ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
မေး။ ။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဘယ်လောက် ရှိပါသလဲ။ မဲရုံပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။ ပြည်ပမှလေ့လာသူများ ဖိတ်ခေါ်ပြသဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါသလား။
ဖြေ။ ။တစ်နိုင်ငံလုံး ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ (၂၉)သန်းကျော်ရှိပြီး မဲရုံပေါင်း (၄ဝဝဝဝ)နီးပါး ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားလေ့လာသူ Observer ခေါ် မခေါ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိမိနိုင်ငံတွင်ရွေးကောက်ပွဲ အတွေ့အကြုံများစွာ ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကော်မရှင်နှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဝင်များဟာ အရည်အချင်းပြည့်မီပြီး နိုင်ငံတော်အပေါ် စေတနာထားသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းတို့ကိုသင်တန်းများ အကြိမ်ကြိမ် ပို့ချထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများဟာ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတ၊ ရှင်းလင်းလွယ်ကူကြောင်း မြင်သာပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတဲ့နေ့မှာ ပြည်တွင်းရှိ သံတမန်များ၊ ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများမှဌာန ကိုယ်စားလှယ်များကို ဖိတ်ခေါ်ပြသမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သံတမန်များဟာ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အတွက် အခြားသူများကို ခေါ်ယူပြသရန် မလိုအပ်ဟု ယူဆပါတယ်။
မေး။ ။ ရခိုင်နှင့် ကရင်ကပြားတစ်ဦး အနေနဲ့ ဘယ်လိုမဲပေးရမယ် ဆိုတာကို သိလိုပါတယ်။
ဖြေ။ ။ မှတ်ပုံတင်မှာပါရှိတဲ့ ဖခင်ဘက်လူမျိုးကိုသာ ခံယူမှုများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မဲဆန္ဒရှင်ရဲ့ ဆန္ဒအရ နှစ်သက်ရာ လူမျိုးအဖြစ် ခံယူပြီး မဲပေးနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
မေး။ ။ ပြည်ပသတင်းထောက်များ ခေါ်မခေါ်ကိုလည်း သိရှိလိုပါတယ်။
ဖြေ။ ။ ပြည်တွင်းမှာ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်ရှိပြီး သတင်းများ တရားဝင်ထုတ်ပြန်လျက်ရှိ၍ သီးခြားဖိတ်ခေါ်ရန် မလိုအပ်ဟု ယူဆပါတယ်။
မေး။ ။ အကျဉ်းသားများမဲပေးဖို့ လွှတ်ပေးနေခြင်းကို ကြားသိရပါတယ်။ မှန်၊မမှန် သိလိုပါတယ်။
ဖြေ။ ။ အကျဉ်းသားများဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်ဟာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများသာ သက်ဆိုင်ပြီး ကော်မရှင်နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။
မေး။ ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကို အခြားပါတီတစ်ခုမှ တိုင်ကြားမှုရှိတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ထားတယ် ဆိုတာကို သိရှိလိုပါတယ်။
ဖြေ။ ။ မည်သည့်ပါတီမဆို ဥပဒေချိုးဖောက်မှုရှိလျှင် ကော်မရှင်နဲ့ကော်မရှင်အဖွဲ့ အဆင့်ဆင့်က ဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
H.E Mr. Robert Chua Hian Kong (ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ စင်ကာပူသမ္မတ နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး)
မေး။ ။လွှတ်တော်တွင်ကိုယ်စားလှယ် နေရာမည်မျှ ရှိသည်ကို သိလိုပါတယ်။
ဖြေ။ ။ ရွေးချယ်ခံကိုယ်စားလှယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် (၃၃ဝ)ဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် (၁၆၈)ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် (၆၆ဝ)ဦး ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် နှစ်ရပ်ပေါင်းကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဟုခေါ်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် သမ္မတရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုရွေးချယ်တင် မြှောက်မှာဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
ဦးမြတ်ခိုင် လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်(နအဖ ရဲ့ လက်ကိုင်တုတ်ဂျာနယ်)
မေး။ ။ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခြင်း မပြုနိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာ ဘယ်အချိန်ကျမှ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးမှာလဲ။ ဒါမှမဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲ လုံးဝမလုပ်တော့တာလား သိလိုပါတယ်။
ဖြေ။ ။ ယခုအချိန်မှာ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ အခြေအနေမရှိတဲ့ အတွက် မပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောင်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် အခြေအနေပေးသည့် အခါ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ မဲရေတွက်တဲ့အချိန်မှာ သတင်းသမားတွေ အနေနဲ့ အနီးကပ်လေ့လာ သတင်းယူခွင့် ရှိ၊မရှိ သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ သတင်းထောက်တွေက မဲရုံတွေမှာ ဝင်ရောက်ခွင့် ရှိ၊မရှိဆိုတာ ဥပဒေမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတာ ရှိပါတယ်။ ဥပဒေကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
မေး။ ။ ခုနမိန့်သွားတဲ့ထဲမှာ (၅၄)နေရာလို့ ပါပါတယ်။ အဲဒီ(၅၄)နေရာက ဘယ်ပါတီတွေလဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ (၃၇)ပါတီထဲကပါပဲ။ ပါတီအစုံပါပဲ။
မေး။ ။ နောက်မေးခွန်း တစ်ခုက မဲမပေးဘဲနေလို့ရတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်။ ဥပမာ ပါတီကိုတော့ ကြိုက်ပါရဲ့။ အဲဒီမဲဆန္ဒရှင်နယ်မှာ နေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကို မကြိုက်တဲ့အတွက် မဲမပေးဘဲ နေမယ်ဆိုရင် အဲဒီမဲဆန္ဒရှင်အတွက် ဘယ်လိုအကျိုးအပြစ် ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ မဲပေးနိုင်ရဲ့သားနဲ့ မဲမပေးဘူးဆိုရင် အဲဒီနိုင်ငံသားက သူ့ရဲ့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးသွားတာပါ။ မဲပေးတယ် ဆိုတာကတော့ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ပါ။
ဦးခိုင်ခန့် (Hot News ဂျာနယ်)
မေး။ ။ အချုပ်ကျခံနေရသူများ မဲပေးခွင့်နဲ့ နိုင်ငံခြားရောက်နေသူများ မဲပေးခွင့်တို့ကို သိရှိလိုပါတယ်။
ဖြေ။ ။ အချုပ်ကျခံနေရသူများ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ကို ဥပဒေနှင့်ညီ စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးထားပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ခွင်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံခြားရောက် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ စာရင်းကိုတောင်းယူပြီး ၄င်းတို့၏ နေရင်းဒေသ လိပ်စာအရ မဲဆန္ဒနယ်အလိုက် ကြိုတင် ဆန္ဒမဲများပေးနိုင်အောင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနနဲ့ညှိနှိုင်း၍ ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Mr. THOMAS L.Vajda (ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ သံရုံးမှ သံရုံးခေတ္တယာယီတာဝန်ခံ)
မေး။ ။ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့်နေ့မှာ နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်များ သတင်းရယူခွင့် ရှိ၊မရှိ သိလိုပါတယ်။
ဖြေ။ ။ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်ကိစ္စမှာ အခြားဝန်ကြီးဌာနနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတဲ့နေ့မှာ ပြည်တွင်းရှိ သံတမန်များ လေ့လာခွင့်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မဲရုံအတွင်းကို ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသူများသာ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မဲဆန္ဒရှင်များ လွတ်လပ်၍ လျှို့ဝှက်စွာဆန္ဒပြုနိုင်ဖို့ အတွက် မဲရုံအတွင်းမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခွင့်ကို ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဦးကိုကို ..ရန်ကုန်မီဒီယာဂရုပ်(နအဖ ရဲ့ လက်ကိုင်တုတ်ဂျာနယ်)
မေး။ ။ ပြိုင်ဘက်မရှိတဲ့ (၅၄)နေရာမှာ စာရင်းသွင်းစဉ်ကတည်းက တစ်ဦးတည်း ရှိတာလား သိလိုပါတယ်။
ဖြေ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်း တင်သွင်းစဉ်ကတည်းကတစ်ဦး တည်းစာရင်းသွင်းမှုရှိသလို ကော်မရှင်ရဲ့စိစစ်ချက်အရ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးတည်းသာ ကျန်ရှိနေခြင်းလည်း ရှိပါတယ်။
မေး။ ။ ပြိုင်ဘက်မရှိသည့် (၅၄)နေရာဟာ ဘယ်ပါတီက ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဆိုတာ သိလိုပါတယ်။
ဖြေ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးတည်းသာရှိတဲ့ (၅၄)နေရာမှာ ပါတီတစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရေးပါတီ (၃၇)ပါတီအနက်မှ အချို့ပါတီကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ကြပါတယ်။
မေး။ ။ အချို့တွေက ပြောကြတယ်။ မိမိမနှစ်သက်တဲ့ ပါတီနဲ့လူဆိုရင် ကြက်ခြေခတ်မယ်။ နှစ်သက်တာကို အမှတ်ပေးမယ်လို့ ပြောကြတယ်။ အဲဒီတော့ ကြက်ခြေခတ်တာ ပါသွားရင် ပယ်မဲဖြစ်သွားမှာလားဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ မဲပေးတဲ့နေရာမှာ မဲလက်မှတ်မှာ မိမိနှစ်သက်ရာ ခြစ်ပါလို့ ပါပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဥပဒေတွေမှာလည်း ပါပါတယ်။ အမှန်လေးခြစ်တယ်။ အမှားလေးခြစ်တယ် ဆိုတာ သူ့ရဲ့ ပယ်မဲနဲ့ပတ်သက်လို့ မဲရုံက ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
H.E. Mr. Julius Georg Luy (ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ဂျာမနီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး)
မေး။ ။ မဲဆန္ဒရှင်များက မည်သည့်မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်သည်ကို ကြည့်ရှုခွင့် ရှိပါသလား။
ဖြေ။ ။ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကို မဲရုံတိုင်းမှာကပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမည် စာရင်းကျန်နေရင်လည်း တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ မဲပေးခွင့်မရှိသူ ပါနေရင်လည်း ကန့်ကွက်နိုင်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုခွင့်တောင်းရန်မလိုဘဲ မည်သူမဆို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
မေး။ ။ အမျိုးသမီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အရေအတွက်ကို သိလိုပါတယ်။
ဖြေ။ ။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အနက် အမျိုးသမီး (၁၁၄)ဦး ပါဝင်ပါတယ်။
မေး။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးတည်းသာရှိတဲ့ မဲဆန္ဒနယ်များကို သိလိုပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို မည်သည့်အချိန်တွင် ကြေညာပေးမည်ကို သိလိုပါတယ်။
ဖြေ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးတည်းသာရှိတဲ့ မဲဆန္ဒနယ်(၅၄)နယ်ရှိပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ကော်မရှင်သို့ စာရင်းဇယားများပေးပို့ စိစစ်ပြီးသည်နှင့် ထုတ်ပြန် ကြေညာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခြင်းမပြုနိုင်တဲ့ ဒေသများ ကြေညာရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုပါတယ်။
ဖြေ။ ။ ယင်းဒေသများဟာ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် အခြေအနေမရှိကြောင်း ခိုင်လုံတဲ့ အထောက်အထားများ တွေ့ရှိရလို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခြင်းမပြုရန် ဆုံးဖြတ်ကြေညာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အရေအတွက်နဲ့ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ် အရေအတွက် တို့ကို သိလိုပါတယ်။
ဖြေ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စုစုပေါင်း (၃ဝ၇၁)ဦးရှိပြီး အဲဒီအထဲမှာ တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ် (၈၂)ဦးပါဝင်ပါတယ်။
မေး။ ။ ယခုကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်ပကတရားမျှတမှုမရှိဟု ပြောကြားနေမှုများ အတွက် သိရှိလိုပါတယ်။
ဖြေ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့် ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ မိမိနိုင်ငံအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်းသာဖြစ်၍ ကော်မရှင်က ဥပဒေနှင့်အညီ် တရားမျှတအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံက ပြည်သူတွေပေးတဲ့မဲကို ပြည်သူတွေရှေ့မှာပဲ ရေတွက်မှာဖြစ်လို့ အခြားနိုင်ငံများရဲ့ ပြောကြားချက်ကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းချေပဖို့ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသည့် သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးယာယီ တာဝန်ခံများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဌာနကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များ အသင်းမှ အသင်းဝင် သတင်းထောက်များ၊ ပြည်တွင်း ဂျာနယ်/မဂ္ဂဇင်းများမှ စာတည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် သတင်းထောက်များသည် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဥပစာရှိ မြက်ခင်းပြင်၌ ဆန္ဒမဲပေးမှု သရုပ်ပြခြင်းကို ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်။
ရင်းမြစ်...လျှပ်တပြက်ဂျာနယ် (နအဖ ရဲ့ လက်ကိုင်တုတ် ဂျာနယ်)
နအဖရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးတည်းသာ ရှိသောမဲဆန္ဒနယ် ၅၄ နေရာရှိယင်းအနက် ၅၂ ဦးမှာကြံ့ဖွတ်ပါတီမှဖြစ်
မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးတည်းသာရှိသော မဲဆန္ဒနယ် ၅၄ နေရာ ရှိကြောင်း သိရပြီး ယင်း အနက် ၅၂ ဦးမှာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီမှ လွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
၎င်းက အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သော ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ သတင်းမီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်တွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံမည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးတည်းသာရှိလျှင် ယင်းမဲဆန္ဒနယ် အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခြင်း မပြုတော့ဘဲ ထိုပုဂ္ဂိုလ်အား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲက ကြေညာရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၈ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေအရ သိရသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံရေးပါတီ ၃၇ ပါတီမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၃၀၀၀ ကျော် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ယင်းအနက် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၀၀၀ ကျော် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသွားမည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်သည်ဟု news-eleven ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ပင်လုံညီလာခံကြီး နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ပြောကြားခဲ့သောမိန့်ခွန်းနှင့်တခြားမိန့်ခွန်းများ
ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ တခု တက်လာတဲ့အခါကျရင် ကျမတို့ ပင်လုံ လိုညီလာခံကြီး ထပ်ပြီးခေါ်ရမယ်လို့ ကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒီလို ပင်လုံ ကဲ့သို့ ညီလာခံကြီး ထပ်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ ကျမတို့ ပြည်ထောင်စုသစ်ကို ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ ထူထောင်မယ် ဆိုတာ ကျမတို့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေ အားလုံးနဲ့ ဆွေးနွေးပြီးတော့ ကျမတို့ ဆုံးဖြတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.။
ဒီလိုညီလာခံမျိုးဆိုတာဟာ ပြည်သူလူထုတင်မြှောက်တဲ့ အစိုးရမျိုးကမှ သာ ခေါ်ယူပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ဒီညီလာခံနေပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ပြည်ထောင်စုသစ်ဖော်ထုတ်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုကိစ္စများဟာအများပြည်သူလူထုကနေပြီး တော့ ၊လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲ များမှတဆင့် တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ အစိုးရ များ ကသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ကျမတို့ ယုံကြည် ပါတယ်။
အများပြည်သူမတင်မြှောက်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးက၊ ဒီလိုညီလာခံမျိုးကို ဘာမှ ထိထိ ရောက်ရောက် လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုထဲမှာ ကျောင်းသားလူငယ်တွေကနေ စပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့တယ်။ ဒီလောက်တောင်မှ ကျောင်းသားလူငယ်များက သတ္တိနဲ့မိမိတို့ အသက်တွေကိုစတေးပြီးတော့ စခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအောင်မြင် သည့်တိုင် ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားဖို့ ကျမတို့မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်.။
ကျမတို့ အခု ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုထဲပါဝင်လာတာဟာ အာဏာလိုချင်လို့ ပါဝင်လာကြတာ မဟုတ်ဘူး။ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ချင်လို့ ပါဝင်လာကြတာပဲ။
မတရားတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ဖို့ ကြောက်ရမယ်။ မမှန်တဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ဖို့ ကြောက်ရမယ်။ လောကမှာ ကြောက်ဖို့ဆိုတာ ဒီနှစ်ခုဘဲရှိပါတယ်..။
ကျမတို့ တဦးချင်းရပ်တည်လို့ ဘယ်လို့မှမဖြစ်ဘူး။ဗမာချည်းပဲလည်း ရပ်တည်လို့ မဖြစ်ဘူး။ မွန်ချည်းပဲ ရပ်တည်လို့မဖြစ်ဘူး။ ရှမ်းချည်းပဲ ရပ်တည်လို့မဖြစ်ဘူး။ ကျမတို့ တိုင်းပြည်ကြီးတည်တံခိုင်မြဲရေးဆိုတာ အားလုံးကနေ တစည်းတရုံးတည်းနေမှ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကျမ ယုံကြည်တယ်။
တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင် များဟာ ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှု အင်အားနဲ့ပဲ အုပ်ချုပ်တာဖြစ်ရမယ်။ လက်နက်အင်အားနဲ့ အုပ်ချုပ်တာ မဖြစ်ရဘူး။
တိုင်းပြည်မှာ လွတ်လပ်မှုပိုရချင်ရင်၊ လူ့အခွင့်အရေးများပြည့်ပြည့်စုံစုံခံစားချင်လို့ရှိရင် လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ နိုင်ငံရေးကို ဝါသနာပါရမယ်။ နိုင်ငံရေး ကိုလုပ်ရဲရမယ်၊လုပ်ချင်ရမယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် (၁၉၈၈.၁၉၈၉) စည်းရုံးရေးခရီးစဉ် များတွင် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်း တချို့အားကောက်နုတ်တင်ပြထားပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Sunday, October 31, 2010 Links to this post
ပြည်သူလူထု ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ ဆန္ဒအမှန်၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးေ...
မိခင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့နိုင်ဘို့ သားငယ် ကို...
မြန်မာနိုင်တော်အလံအား မီးရှို့ဖျတ်ဆီးသူ ရုတ်တရက်ကွ...
နအဖ၏ ဝါဒဖြန့်ချိရေးဇတ်ကားများကို ရိုက်ကူးခဲ့သော ဒါ...
ဂီရိမုန်တိုင်း နောက်ဆက်တွဲ ဓာတ်ပုံများနှင့် ရခိုင်...
မိခင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေ့နိုင်ဖို့အတွက် သားင...
ရွေးကောက်ပွဲ အကြို တံဆိပ်ခေါင်းတွေ ထုတ်အုံးမယ်ဆိုပ...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဒဂုံမြို့သစ်မြို့န...
ပြည်သူက အယုံအကြည်မရှိ အလိုမရှိတဲ့ နအဖလက်ပါးစေ ကြံ...
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ မှ KNU ခေါင်းဆောင်များ၏...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်း ၂၂၀၀ ကျော် အကျဉ်းကျနေဆြဲ...
နအဖ ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲ မှာ ကြံ့ဖွတ် ပါတီ က လာဒ်ပေးစည်...
အင်္ဂါဝတ်ပြုဆုတောင်း အဖွဲ့ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ကထိန်သင်္က...
ကြိုတင်မဲပေးစေခြင်းတွင် စည်းမျဉ်းများ ကိုကျော်၍ တစ...
စစ်အာဏာ နအဖ တို့၏ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုသပိတ်မှောက်...
ဒုတိယပင်လုံညီလာခံမှသည် စစ်မှန်သော ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထော...
ကိုစံဇာဏီဘို က ဒီလိုပြောကြားခဲ့တဲ့ နအဖ ရဲ့ အလံသစ် ...
နအဖ ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဟာ လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတသည်သာအာ...
ဦးသန်းရွှေ ပြောပြောနေတဲ့ ခေတ်မှီတိုးတက်တဲ့စက်မှုနု...
ယနေ့ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း(TG) ပိုင်Air Bus A-300လေ...
ယနေ့ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်မှာ အဖွဲ့ချုပ်လူငယ်အဖွဲ့ဝင်...
မဲရုံကိုမသွားပါနဲ့ မဲမပေးပါနဲ့ လို့ ပြောတဲ့ အမျိုး...
နအဖ ရဲ့ မတရားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌဦးသိန်...
အမျိုးသားဒီမိုကရေအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးေ...
မြန်မာပြည်တွင်းက နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တွေနဲ့ ပြည်တ...
အသက် ( ၅၁ )နှစ်ပြည့်..မှာတမ်း ။
သတင်းထောက်မလေး အမေး မတော်တုန်းက ထက်ထက်မိုးဦးက ပါး...
နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မယ့်နအဖ ရဲ့ ရွေ...